I-Tiemoue Bakayoko Ibali leNgcaciso yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola baseFrance I-Tiemoue Bakayoko Ibali leNgcaciso yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leNjini yeMidiya eyaziwa kakhulu ngeSiteketiso; 'Bakoko'. I-Tiemoue Yethu Bakayoko Yabantwana Ibali kunye ne-Untold Biography iimbali zizisa i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kwixesha lakhe lokuzalwa. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye neeninzi ze-OFF-Pitch facts about him. Ngoku kungenasinye i-adieu, Qalisa.
I-Tiemoue Bakayoko Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts: Obomi bakwangoko
UBakayoko wazalelwa eParis ngo-17 Agasti 1994 kubazali abafudukela e-Ivory Coast baya kwi-capital yaseFransi ukuze baphile impilo engcono.
Njengabaninzi bamabini abo abamnyama, ungumfazi weFrentshi-i-Ivorian. Ngenkathi ekhula, wayehlala kwindawo yaseBarès enabantu abaninzi baseAfrika. Kwakuyindawo yaseParis eyaziwa ngokusemthethweni ngenani labo elikhulu labantu abamnyama abasuka eAfrika.
Tiemoue Bakayoko ngelixa umntwana ebona abazali bakhe benza zonke iintlobo kuthotywa imisebenzi nje ukubeka ukutya etafileni nokuthumela imali kwiinkonzo ezongezelelweyo kwi-Ivory Coast. Imisebenzi emininzi kakhulu njengalelo xesha iqhutyelwa ngakumbi ngabantu abamnyama baseAfrika, nabo bafundiswe kakhulu. Ukuya esikolweni kwakungabalulekanga kumfana omncinane.
I-Tiemoue Bakayoko Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts: Iphefumlelwe yiNdebe yeHlabathi
Njenge ISadio Mane, waphefumulelwa kwinqwelo yebhola ngeNdebe yeHlabathi yeFrancis 1998. Waqala ukumangalisa xa ebona iSenegal, ummelwane welizwe lakhe (i-Ivory Coast) ekuphumeni kweFransi kwindawo yokuvula kunye nokubukela iFransi ehla ukuthetha ubuqaqawuli bemqhudelwano.
Ngokutsho kwakhe, "Ndiphefumulelwe ngubungqina beentaba zaseFransi abamnyama kwiqela. Ndandiyindoda eyayithanda abakhuseli abakhulu kunye nabasemzini. Okuthandwa nguPatrick Vieira, uLilian Thuram noMarcel Desailly babethandayo. Imisebenzi yabo yabetha inxaxheba kumsebenzi wam. Nangona kunjalo, andinakukwazi ukuthetha ngoClaude Makalele owabeka isiseko sento endiyiyo. "
Njengabanye abantombazi abamnyama, imfundo yanyuka ngenxa yeBakayoko, yagqithiswa yilebhola emva kweFrancis 1998 yelizwe. Abazali bakhe baqonda ukubiza kwakhe kwaye banikezela yonke inkxaso ayifunayo ukuba ibe nesiqalo esilungileyo. Babhalisa kwiziko lebhola lebhola (Le club yebhola ye-PARIS 15) kwi-5 yobudala.
I-Bakayoko ibonise inqanaba elikhulu lokubaluleka ngelixa edlala ibhola ekwinqanaba lokuqala lezemfundo. Wayesendleleni engaphezulu kwebhokhwe eliqhelekileyo kwi-academy kwaye wayedla ngokugqithiswa njengomntwana webhola. I-Paris 15 yamgcina iminyaka emine (ukuya kwi-9 yobudala) ngaphambi kokuba avumele abazali bakhe ukuba baqalise ukutshintshela kwisikolo esingcono ngegama -CA Paris Charenton. Wadlala kuphela ngonyaka eCharenton ngaphambi kokuba enze olunye uhambo I-Montrogue FC 92. Kulo qela, udibana neengxaki ezingenakunqandwa, i-waterloo.
I-Tiemoue Bakayoko Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts:Iimbandezelo
Njengomdlali omncinci (iminyaka eyi-10) ngelixa edlala iMontrogue FC 92, iBakayoko wayenomlenze ophukile ngokuthetha kwakhe 'umngeni onzima' evela kumdlali. Ubunzima bokulimala kwabangela ukuba kubekho ixesha elide emsebenzini wakhe omncinci.
"Ngexesha elithile ndabona umsebenzi wam omncinci ufike ngokukhawuleza". Kwakuyixesha leentlungu ezinzima kum. Wam Inkqubo yokubuyisela yayicotha kwaye yabona ndichitha iminyaka engama-3 ngaphandle kokudlala ibhola " uthi Bakayoko.
I-Tiemoue Bakayoko Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts:Ukulahlwa
Ngonyaka we-2008, ukubuyiswa ngokupheleleyo kwi-distal breaker rupture kwaqinisekiswa. Wayeyiminyaka eyi-13 nje ngelo xesha. Wayelinde iiveki ezimbalwa ukuqinisekisa ukubuyisela ngokupheleleyo ngaphambi kokuba akhethe apho ayeke khona emsebenzini wakhe. Ngelishwa akukho klabhu yamthatha ngenxa yokulahlekelwa kwefomu. Wayehlwaya ukuchaswa nakwii-zakhe zangaphambili zebhola zezemidlalo.
Kwakuyiziko lebhola e-Rennes ekugqibeleni yamnika ithuba lokuphinda athole ifomu emva kweengcamango ezininzi zolawulo. Baye bacinga ukuba wayekhe walinganiswa kakhulu kwiiklabhu zakhe ezindala. Oku kwenzeka kwi-2009 xa wayeseminyaka eyi-14 kuphela.
I-Tiemoue Bakayoko Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts:Ukulandela iMachel's Footsteps
Ukulandela amaxesha akhe amabini okuqala eMonaco, apho enza i-31 Ligue 1 imibukiso, iBakayoko wanquma ukutshintsha indlela yakhe yokuziphatha ukuze azalise amandla akhe. Siyabulela umcebisi wakhe, uClaude Makalele owamiselwa njengomlawuli wezobuchwepheshe eMonaco ngoJanuwari 2016.
Indima kaMakelele eBakayoko
"Makélélé wandinceda kakhulu. Xa efika eMonaco andizange ndibe ngumdlali mhle kakhulu, kodwa ndandincokola kakhulu kunye naye. Wandinika iingcebiso ezininzi waza wandifundisa indlela yokudlala ibhola yam ibhola ngokulula. Waye wandivumela ukuba ndimbizele uncedo olongezelelweyo loqeqesho. "
I-Tiemoue Bakayoko Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts:Ukukhula ngokukhawuleza
Akuzange kuthathe ixesha elide ngaphambi kokubona ukuba unokuzinyamekela ngakumbi. Kulo mdlalo, waba ngumdlali we-Starter rhoqo kwi-Monaco, ekuncedeni iqela ukuba liphumelele kwisiqephu se-1 kwisihloko kwixesha le-2016 / 2017. Akuzange nje kuphela ukuba wazibeka njengengxenye ebalulekileyo yeqela likaMonaco kunye nemisebenzi ehambelanayo, wayenobungozi obuncinane kunye nesicelo sakhe ngexesha loqeqesho sasingagxeki.
Ikhefu lokuHlaba kweBakayoko
Namhlanje, iBakayoko ekugqibeleni ikhule. Ubeke ubudibaniselwano bamandla kunye nombono phakathi kwendawo esemgangathweni ukusetyenziswa kakuhle.
I-Tiemoue Bakayoko Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts:Umdlalo we Play
I-Bakayoko ilinganiswa Yaya Touré ngenxa yeempawu zakhe ezinqamlekileyo zohambo, ukufunda ngokuqondakalayo komdlalo, ukukwazi ukuthatha iipaseli kunye nokudibanisa okufezekileyo, ukudlula nokuhamba. Umgangatho wakhe obaluleke kakhulu kukumzimba kunye nokudlala.
Bayoko Isitayela sokudlala
Uyingcali kwiqela lokuzimela eliphakathi. Ukukwazi kwakhe ukuhlula ukuhlaselwa nokuqhubela phambili ukuqhubela phambili kwaba yinto edlalwa ngabadlali ababini kuphela (uGabi noDanny Drinkwater) bafezeke ngakumbi kwi-2016 / 2017 iqela leligi lexesha.
Ukulinganiswa kweBakayoko Midfield
Umntu waseBakayoko eMonaco, ULeonardo Jardim, kwathiwa: "Unqoba iibhola ezininzi, ubeka ibhalansi kwiqela. Uyidlula ibhola kakuhle kwaye iphumelele. Yiyo indima yeBakayoko. Ungumdlali opheleleyo, ubume obubalulekileyo bezemidlalo, ulungele ukuphucula kunye nokubeka iinjongo zokuzimisela. "
I-Tiemoue Bakayoko Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts:Black Knight
Kuzo zonke iimpawu azinayo, ubunzima bukaBayoko kunye nobunzima obuya phezulu kwaye yile ngongoma yakhe yokuthengisa.
Abantu abaninzi baye babuza isizathu sokuba agqoke imaski? ... Ngoku siyakuphendula.
UBakayoko ubeke waphula iipumlo zakhe ekuqeqesheni ekuqhubeni ukuya kwi-Champions League yokugqibela ye-Champions League ngo-Juventus.
Akazange avumele ukuba loo nto imvimbele ekubeni aqalise amaNtaliyane, kwaye wagqiba ekubeni agqoke imaski ebusweni ebomnyama ekhuselekileyo eyayimnika umoya we-superhero engummangaliso kunye nesihloko 'Umkhweli hashe omnyama'.
U-Bakayoko uvakalelwa iintlungu ekudleni kwakhe kwangaphambili. Njengoko kubhaliwe ngasentla, unqobile ixesha elide elijongene nomlenze ophukile njengomntwana.
I-Tiemoue Bakayoko Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts:Ukusuka kwipinki ukuya kumnyama (Icandelo 2)
I-Infact, uBakayoko wafumana utshintsho oluninzi kwimpilo yakhe Emva kokudibana kwakhe namazwe angaphambili aseFransi, uClaude Makalele. Uguqule ekubeni uqhelekile ukuba ukhangele i-dapper.
Namhlanje, wenza inkcazelo, kokubili kunye nokucima. I-1.84m ebalulekileyo, akayi kuhlamba i-violet xa efika ekubonakaleni kwakhe, edayayo iinwele zakhe zincinki olunye usuku, i-blonde elandelayo.
Xa efika eMonaco ngo-2014 wayenokubonakala ebonakala ephuma kwiindawo zokuhlala ezithandekayo emva kwesondo sePorsche Cayenne.
I-Bakayoko yatshintshe yonke imibala yeemoto zakhe ukusuka kwipinki ukuya kumnyama. Ukongezelela, waqala ibhokisi waza watshintsha ukutya kwakhe waza waphucula amandla akhe.
Kodwa emva kokuguquka kolwandle kwisimo sengqondo, esabangelwa ngumqeqeshi wakhe osemtsha e-Rennes, wayitshintsha le ndlu ukuba ibe yindlu ethobekileyo kwaye yafumana iCayenne ibumnyama. Wachaza: "Babesithi ndibathande izinto ezintle ebomini, ukuba andingenayo igrafter, ukuba ndiza (ku-Monaco) kuphela umvuzo ophezulu, okwakungenjalo."
I-Tiemoue Bakayoko Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts:Yiyiphi inombolo yakhe?
UBakayoko wayedlala inombolo ye14 kwijezi yakhe eMonaco. Uyikhethile ngomvuzo kwi-14th district (esifundeni) e-Paris apho azalwe khona nabazali base-Ivory Coast ngo-17 Agasti 1994, kwaye baya kunxiba inombolo efanayo ne-Chelsea.
I-Tiemoue Bakayoko Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts:Deschamps umqhubi
Umqeqeshi waseFransi uDidier Deschamps uyilungu elihlawulelwayo ngokupheleleyo le-Bakayoko.
I-1998 inkosikazi yokuphumelela kweNdebe yeSizwe iyazi into okanye ezimbini malunga nezithako ezenza umdlali omkhulu. Wabiza iBakayoko ukuba ajoyine iqela laseFransi ngeveki emva kwendima ebalulekileyo ekulahla iManchester City eYurophu. Deschamps wathi: "Unamandla, unefuthe, ufumana amanqaku athabatha izigqibo, wenza iinjongo kwaye ulunge kakhulu."
I-Tiemoue Bakayoko Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts:Inhloko yakhe iHumbled City
Naliphina ixesha leManchester City liza kufika eStamford Bridge ukuze libone iBakayoko lidlala, baya kukwazi kuphela umonakalo onokukwazi ukuwenza. Siyabulela kwimbali.
Emuva ngo-Matshi, umgca wakhe ophezulu kwi-13 imizuzu ukusuka kwesoxesha wayalahla isiXeko sasePep Guardiola kwisiXeko se-Champions League ekugqibeleni-i-16 ephuma kwiinjongo ezingekho. ISixeko safika kwisiqendu ekulawuleni umtya emva kwe-5-3 ukunqoba komlenze wokuqala. Kwaye kunye nemizuzu ye-19 ukuya, babeyi-6-5 ngaphambili, kuphela iBakayoko ukubuyela ekhayeni likaThomas Lemar ukukhawuleza ukunika uMonaco udumo oludumile. Kuluvuyo olukhulu ukufumana amanqaku kwi-Champions League. Bendingayilindelanga le, ” uthe.
I-Tiemoue Bakayoko Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts:Kutheni i-Chelsea FC yamsayina
Inyaniso iya kuxelwa. Bamba kwizicwangciso zikaMourinho. Okhethekileyo wamthanda ngenxa yokuba udibana neenkcukacha zakhe. (Unamandla, Unamandla kwaye Ukhawuleza).
Kutheni i-Chelsea isayine iBakayoko
UTyemoue Bakayoko wakhetha i-Chelsea esikhundleni seManchester United kuba uthanda u-Antonio Conte kuJose Mourinho. Waye waguqula iifowuni ezivela kwiCandelo elikhethekileyo elenza waxinezeleka.
UBakayoko uthe ngexesha lokufika kwakhe e-Chelsea: "Kwakumangalisa ukuba uMourinho undibize, nangona ndacetyiswa ngaphambi kokuba angandibhenela njani ngendlela ekholisayo. Ndandiphulaphule iingxabano zakhe malunga nokuba kutheni ndifanele ndihambe eNyuvesi. Akazange azi into ethile, ndikhulile ndibukele iBellani kwaye ndingekho. Ukutyikityela i-Chelsea kwakuyinto engokwemvelo kum kuba yinkampani endiyithanda kakhulu ebuntwaneni bam. "
Kutheni uMourinho Ulahlekile Bakayoko
Mhlawumbi esinye isizathu sokubambisana okukhulu phakathi kukaJoseph Mourinho noAntonio Conte.
I-Tiemoue Bakayoko Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts:Ukufika kwe-Chelsea kwiJet Private
UTiemoue Bakayoko ufumene Chelsea abalandeli bavuyiswa ngokuthumela umfanekiso wakhe ufike kwi-jet yangasese eyayimiselwe ukuba ibhabhise eLondon esuka eFransi. Le jet yamyisa eLondon ukujoyina iBlues. Oku bekuyihambo lwakhe lokufumana unyango kwaye asayine isivumelwano kunye ne-Chelsea.
UBakayoko wangena kwi-jet yangasese eya e-Chelsea FC
Wahamba kunye nomyalezo: "Uhambo, Masihambe ... Ndiya kuba neveki elihle ne-Chelsea FC" ihamba kunye nenqwelo yendiza emojis.
I-Djibril Sidibe Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
UJohn Terry Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts
Ingxelo kaMichael Essien yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Umhla oLungisiweyo: Agasti 22, 2020